Mideynta Qoyska - Telling the Real Story
Waa maxay mideynta qoysku?
Mideynta qoysku waa marka xubnaha qoyska ee ku tiirsan sida carruurta, xaasaska, waalidiinta, iwm la isu keeno ka dib muddo kala maqnaa. Magangalyo-doonka iyo qaxootiga, howshan waxay ka dhici kartaa gudaha dal magangelyo, xuduudaha oo dhan, ku noqoshada wadankii ay ka yimaadeen ama dal saddexaad.
Sideen ku ogaadaa haddii aan u qalmo mideynta qoyska?
Ehelkaaga ayaa kaala talin kara inaad uqalanto isu keenista qoyska kadib markaad lahadasho qareen ama adeegaha bulshada ee wadanka ay ku nool yihiin.
Wadamada badankood waxay bixiyaan adeegyo sharci oo bilaash ah iyada oo loo marayo NGO-yada maxalliga ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad bogagga internetka ee shakhsiga ah khadka tooska ah halkaasoo ay had iyo jeer ka bixiyaan tilmaamaha u-qalmitaanka iyo shuruudaha dalabka waddanka gaarka ah ee ehelkaagu ku yaal. Nidaamku wuxuu noqon karaa mid dhib badan, jahwareer leh, oo dheer, sidaa darteed waa muhiim in la helo macluumaad ku saabsan u-qalmitaanka iyo hababka dalabka kaliya iyadoo loo marayo ilo lagu kalsoon yahay Xaaladaha qaarkood, xafiiska UNHCR ee magangalyada ama wadanka loo socdo ayaa laga yaabaa inuu kaaala taliyo u qalmitaankaaga sidoo kale.
Sidee UNHCR u taageeri kartaa hawsha midaynta qoyskayga?
Awoodda UNHCR ee ah inay kaa caawiso mashruuca mideynta qoyskaaga waxay kuxirantahay goobta aad ku nooshahay iyo qeexitaanada kiiskaaga, laakiin hoosta waxaa ku yaal tusaalooyin yar oo taageero suurtagal ah:
Buuxi Nidaamyada Danta Guud ee Rasmiga ah ujeeddada midaynta qoyska iyo taageerida arjiga midaynta qoyska
Fududeynta bixinta dukumiintiyada ujeedada FR;
Bixiyaan la-talin shakhsiyaadka ku jira geedi socodka FR, oo ay ku jiraan u gudbinta xubnaha qoyska ee dibadda bixiyeyaasha adeegga ama kaalmada sharciga;
Fududeeyaha saadka safarada wareysiyada safaarada;
La xiriir dawladaha martida loo yahay fiisooyinka bixitaanka iyo qaababka la xiriira;
Ka caawi helitaanka dukumiintiyada safarka ee lagama maarmaanka u ah fududeynta safarka;
Fududee baaritaanka DNA markii loo baahdo;
U gudbi kiisaska gargaarka safarka iyo taakulaynta;
Ka jawaab su'aalaha NGO-yada iyo qareennada gaarka loo leeyahay iyo kuwa loo yaqaan 'bon bono' ee u baahan talo ama caawimaad si looga caawiyo dib u mideynta qoysaska horay loo sii wado marka la helo ogolaansho
Sanadkii 2019, UNHCR waxay mashruuc ka bilowdey Masar, Itoobiya (Addis Ababa iyo Shire), Liibiya iyo Suudaan (Kassala iyo Khartuum), oo loogu talagalay in lagu caawiyo carruurta qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah, dhallinyarada iyo xaasaska waaweyn ee la midooba xubnaha qoyskooda. UNHCR waxay iskaashi la sameysay Mashruuca Caalamiga ah ee Caawinta Qaxootiga (IRAP) si ay u siiso taageero sharci qaas ah oo khaas ah qaxootiga iyo magangalyo-doonka xubnaha qoyska nukliyeerka ee wadamada soo socda: Belgium, France, Germany, Norway Sweden, the Netherlands, the UK, iyo Maraykanka.
IRAP waxay lashaqeysaa koox qareeno gudaha ah, NGO iyo la-hawlgalayaasha bono ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika si loo siiyo caawimaad xagga sharciga ah si loo xareeyo oo loo gudbiyo ama loo dacweeyo codsiyada mideynta qoysaska ee kiisaska adag. UNHCR waxay ku siin kartaa taageero toos ah kuwa xiriir qoys la leh Talyaaniga iyo Kanada iyadoo u sii marinaysa xafiisyadayada UNHCR ee Rome iyo Ottawa.
Haddii aad tahay qaxooti ama magangelyo-doone Masar, Itoobiya, Liibiya ama Suudaan, waxaad la xiriiri kartaa meelaha ay ku midoobi doonaan qoysaska UNHCR ee ku sugan mid kasta oo ka mid ah goobahan cinwaanka emaylka hoos ku qoran.
Haddii aad magan-galyo ka raadsatay dal kale oo aan ahayn afarta kor ku xusan, fadlan la xiriir xafiiskaaga UNHCR si ay si fiican kaagala taliyaan awooddooda ay ku caawin karaan.
Waan ogahay inaan uqalmo mideynta qoyska, laakiin aniga iyo ehelkeyga ma ogin sida loo bilaabo howsha. Maxaan qaban karnaa?
Waxay kuxirantahay wadankaaga magangalyo iyo wadanka loogu tala galay, UNHCR waxay awoodi doontaa inay kaa caawiso iskuxirkaaga qareenka shabakadayada xafiisyada dibada.
Muddo intee le'eg ayay qaadanaysaa ka hor intaanan ku biirin qaraabadeyda?
Marka adiga iyo ehelkaaga aad xareysaan arjiga mideynta qoyska, ma jirto wax damaanad ah in kiiskaaga ay ka ansixin doonaan masuuliyiinta awooda u leh wadanka loo socdo. In kasta oo ay UNHCR awood u yeelan karto inay taageerto nidaamka mideynta qoyskaaga, UNHCR wax saameyn ah ama saameyn ah kuma lahan go'aan kasta oo laga gaaro codsiyada mideynta qoyska. Go'aankan waxaa sameeya hay'adaha awooda u leh ee wadanka aadaya oo kaliya.
In kasta oo habraaca iyo shuruudaha mideynta qoysaska ay ku kala duwan yihiin waddan kasta, howshu waxay sii dheeraan kartaa iyadoo baahi guud loo qabo in la bixiyo dukumiintiyo badan (baasaboor qaran, aqoonsi qaran, shahaadooyinka dhalashada iyo guurka, iwm.) Kana soo qeybgalo wareysiyo badan. Xaaladaha qaarkood, waxaa lagaa rabi karaa inaad bixiso DNA si loo xaqiijiyo xiriirka qoyska. UNHCR wax talo ah kama bixin karto jadwalka waqtiyada barnaamijyada mideynta qoysaska shaqsiga ah. Haddii aad dacwad ku guda jirto, fadlan u soo qaado UNHCR dareenkeeda haddii aan suurtagal nahay inaan caawinno.